Sidee si sax ah loogu adeegsadaa warqadda jiingadda ee carbide
1, Hawlgal sax ah oo lagu hagaajinayo garbaha wareegtada carbide-hayaha ah: Hubi in daab-jeex-jeex-jeexa carbide-ga ah uu yahay mid deggan, darafka mindiyuhu ma tegi karo bidix ama midig ama ma boodi karo kor iyo hoos inta lagu jiro hawlgalka. 2: Aaladda wax lagu mindiyo: Afaynta mindiyaha waxaa lagu hagaajin karaa gacanta ama waa la habeyn karaa. Ma ...
ZWEIMENTOOL Xiamen International Blog Fair Blog
Zweimentool ayaa si weyn uga qaybgashay Bandhigga Dhagaxa Xiamen ee Caalamiga ah May 18, 2021, shirkadeennu waxay qaadatay alaabteenna sare tuubooyin isku qasan biyo -qabad iyo alaab goynta biyaha si ay uga qaybgalaan Bandhigga Dhagaxa ee Xiamen ee Shiinaha. Shirkaddayadu waxay ku jirtaa bandhigga 3 -aad hal ...
Zigong Xinhua Industrial Co., Ltd. noqday unit agaasimaha cusub ee Zigong
Ururka Warshadaha Carbide Cement, wuxuu qabtay seminaar tiknolojiyadda wax soo saarka carbide sibidhsan, wuxuuna hormuud u ahaa dhisidda saldhig wax soo saar baar carbide sibidhsan 9kii subaxnimo May 8, 2021, Huidong Hotel ee Magaalada Zigong, 18 -aad Soo -saare Carbide Cement iyo Technologi .. .
Shirkaddayadu waxay ka qayb qaadan doontaa 21 -aad Shiinaha Xiamen International
Bandhigga Dhagaxa oo lagu qaban doono Xiamen, Fujian, China laga bilaabo May 18 ilaa 21, 2021 Bandhigga Dhagaxa Caalamiga ah ee Xiamen waxaa lagu qaban doonaa Xarunta Shirarka iyo Bandhigga Xiamen laga bilaabo Maajo 18 illaa 21, 2021. Maaddaama uu yahay carwadda ugu weyn ee xirfadleyda dhagaxa iyo dhagaxa ...
Furitaanka weyn ee Carwada Caalamiga ah ee Chengdu
Laga bilaabo Abriil 22 illaa 24, 2021, Bandhigga Warshadaha ee Chengdu oo sannadle ah ayaa si weyn looga furay Galbeedka Shiinaha ee Expo City ee Chengdu, Gobolka Sichuan. Bandhigani waa bandhig caalami ah oo uu hoggaaminayo Bandhigga Hannover Milano (Shanghai) Co., Ltd., waana al ...